Wondershare Heshiiska License User End
Heshiiska License User End
Tani waa heshiis sharci ah oo u dhexeeya adiga, user dhamaadka, iyo Wondershare Software Co., Ltd. iyo kabista Wondershare Software (HK) Co., Ltd., sameeysa ee barnaamijka ("Wondershare"), sameeysa ee barnaamijka ("Wondershare"), ku saabsan isticmaalka waxyaabaha Wondershare ("Software"). By rakibidda Software ah, aad ogolaato in aad raacdo shuruudaha heshiiskan.
1. DEEQDA RUQSADA
Wondershare halkan ku siiso (shaqsi ahaan) revocable, xaq shakhsi, non-gaar ah, oo nontransferable si loo soo dajiyo iyo dhaqaajiso Software ah laba kombiyuutarada oo kala duwan oo keliya si aad u isticmaasho shakhsi ah iyo mid aan ganacsi, haddii aad soo iibsatay liisanka ganacsiga ka Wondershare. Wadaagista this Software la shaqsiyaadka kale, ama u oggolaanta qofka kale inuu u arkaan waxyaabaha this Software, waa xad gudub ku ah liisanka this. Waxaa laga yaabaa in aan sameeyo Waxaad Software ka heli shabakad, ama si uun u siiyaan Software ay u badan isticmaala, haddii aad marka hore soo iibsaday ugu yaraan ah liisanka multi-user ka Wondershare.
Software waxaa iska leh Wondershare oo ilaaliya sharciga copyright iyo heshiisyada caalamiga ah copyright. Waxaa laga yaabaa inaad ka saarin ama qarisaan wax lahaansho ogeysiisyada, sumadaha ama calaamadaha ka Software ah.
3. XAD isticmaalka
laga yaabaa in aadan, oo waxaa laga yaabaa in aadan u ogolaan in ay dadka kale (a) Injineer dambe, kala hufto, fasirid, decrypt, guuriso, ama si uun u soo dheegato il code ka, Software ah; (B) ka beddelo, la qaybiyo, ama abuuro shuqullada derivative ee Software ah; (C) koobi (kale oo aan ahayn mid dib-up nuqul), la qaybiyo, si cad u muujiyaan, gudbin, iibiso, kirada, kiraysan ama haddii kale waa ay ka faa'ideysan Software ah.
4. CAYMISKA CD.
The taranka iyo qaybinta Software (koobiga qiimeynta kaliya) Wondershare ee CD-Cover kala duwan daabacay wargeysyada la xiriira waxaa loo ogol yahay. Si kastaba ha ahaatee nuqul ka mid ah magazine la CD loo baahan yahay in loo soo diro Wondershare Software.
License Tani waa wax ku ool ah ilaa joojiyo. Waxaad way ka joojin kartaa wakhti kasta adiga oo burburinaya Software ah, si wadajir ah ula dhan nuqul oo dhanba. Liisanka waxa kale oo joojin doonaa haddii aad ku guul dareysato in ay u hoggaansamaan xilli kasta ama xaalad ka mid ah heshiiskan. Marka joojinta caynkaas oo kale, aad ogolaato inaad la koobi dhan wada baabbi'inno Software ah, wada.
6. MAYA damaanad KALE.
WONDERSHARE SOFTWARE ma ballanqaadayso in software Baadi BILAASH. WONDERSHARE SOFTWARE afeefanaysaa ALL damaanad kale si xushmad leh in software ah, mid ka mid muuqata ama dadban, ay ku jiraan laakiin aan ku xaddidnayn fasaxyada la MERCHANTABILITY, ku haboonaanta ujeeddo gaar ah oo NONINFRINGEMENT EE DHINAC SADDEXAAD XUQUUQDA. Garaynta Ha u ogolaan saaro fasaxyada ama xadeyn ku saabsan INTEE AH damaanad maldahan bishii May, ama ka saarida AMA xaddidaadda WAXYEELADA shil ah ama natiijo, SO XADDAYN sare ama Saarida ma codsan karaan in aad. Damaanad waxa uu ku siinayaa XUQUUQDA sharci oo gaar IYO weliba ku yeelan kartaa xuquuqo kale oo ku kala duwan yihiin xagga maamulka TO XUKUNKA.
Haddii ay dhacdo in ahayni ee bixinta mid ka mid ah laysanka this, dhinacyadu waxay ku heshiiyaan in ahayni aysan saameyn ku yeelan doonaan ansaxnimada qaybaha haray liisanka this.
8. MAGIDDA MAYA khasaaraha ka dhasha.
HADDII MAYA SOFTWARE WONDERSHARE kara ama ALAAB la masuul ka AAD SI wixii ka dhasha, magdhow ah, shil ah ama si aan toos ahayn nooc kasta oo ka soo shaac baxa GEYNTA, fulinta ama Isticmaalka software, XATAA HADDII WONDERSHARE SOFTWARE ayaa kula taliyey OF SUURTO-waxyeeladan.Macluumaadkan. Ma DHACDO DOONISTA WONDERSHARE MAGIDDA SOFTWARE wax SHEEGASHADA, HESHIISKA ha noqoto, xaalmarinta AMA aragti kasta oo kale oo MAGIDDA, ka badnayn lacag shati lacagta BY, HADUU JIRO.
Qirid software THE, AAD caddayso in aad Akhriyaan oo fahmaan iib- dhacan iyo in aad ogolaato in aad raacdo ITS shuruudaha iyo xaaladaha. SIDOO KALE raacsan tahay in heshiiskan la war dhamaystiran iyo BARAXTIRAN EE HESHIISKA labada dhinac u dhaxeeya IYO baddelo ALL soo jeediyey ama HESHIISYADA HORE, af ama qoraal, iyo wax kasta oo la xariirka labada dhinac u dhaxeeya LA XIDHIIDHA LIISAN haatan tilmaaman.